दुई सदस्यीय नेकपा !| Nepal Pati
दुई सदस्यीय नेकपा !
देश समृद्धिमय छ । स्थानिय , प्रदेश र केन्द्र सरकारमा नेकपा छ । जनता छन । घटदो आषा छ । उमंग हराउँदै छ । करिब सात लाख कार्यकर्ता परिचय खोज्दै छन । स्थायी समिती आफ्नो अस्तित्व खोज्न अल्छी मान्दै छ । केन्द्रीय कमिटी साक्षी बस्न नपाएर मर्माहत छ । पोलिटब्युरो मंसिर लागेको केटी जस्तो कहिले , कस्तो केटा माग्न आउँछ भन्दै उत्सुक हुने युवतीको हालत कुर्दै छ । वाम झुकाब राख्ने समग्र समर्थक , शुभेच्छुक र भोटरहरु गाईवस्तु पालेको किसानले पाकेको धान जती असिनाले झारे पछी पराल मात्र काटने कि नकाटने भन्ने दोधारमा परे जस्तै अवस्थामा छन । समग्र मुलुक र पार्टी राजनीति सहि सलामत रहेको बुझ्ने दुई सदस्यीय नेकपा अनिष्टको संकेत महशुस गर्न अनिच्छुक देखिन्छ ।
जोसेफ स्टालिन शासन कालमा सोभियत रुसका बिदेश मन्त्री मोलोतोव थिए । उनी कडा मेहनती र चतुर राजनीतिक खेलाडी थिए । एक पटक उनी पश्चिम देशसँग जटिल विषयमा वार्ता गर्न विदेश गए । वार्तामा भएका घटनालाई टेलिफोन मार्फत स्टालिनलाई जानाकारी गराउँदै थिए । उनले भने , हजुर कमरेड स्टालिन । शान्त स्वरमा फेरी भने , कमरेड स्टालिन । फेरी केही समय पछी दोहोर्याए कमरेड स्टालिन । अचानक उनी भावनामा बग्दै भने । हुँदैन , कमरेड स्टालिन । हुँदैन । निस्चित रुपमा हुँदैन । हजारबार हुँदैन ।
मोलोतोव कम्तीमा एउटा बिन्दु सम्म स्टालिनको विचारसँग असहमती राख्ने हिम्मत जुटाउँथे । यो कुरा पश्चिमको लागी रुचीकर थियो किन कि उनी स्टालिन सँग कुरा राख्ने साहस राख्थे । मोलोतोवको स्टालिन सँग फोनमा भएको एक तर्फी संवाद टुङ्गिना साथ सम्वाददाताले उनी सँग अनुरोध गरे । के म केही सोध्न सक्छु ? फोनमा कुन विषयमा चर्चा हुँदै थियो ? उनले बिनम्रता पुर्वक संबाददाताको जवाफ फर्काए । कमरेड स्टालिनले मसँग सोध्नु भयो । के केही यस्तो थियो ? जसले केही कुरा गर्‍यो , जुन कुरामा म असहमत थिँए ।
रणनीतिक ढंगले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विघटन गर्दै दिवंगत नेता मदन भण्डारीको गुणगान गाउने प्रचण्ड कला पुर्व एमाले पङ्तीमा ओलीलाई खुला मैदान नदिने नीति अन्तर्गत अप्नाइएको खुला सत्य हो । प्रधानमन्त्री एवम पार्टी अध्यक्ष ओलीको केन्द्र देखी गाँउ सम्म आफ्नै पकट राख्ने मनसायको कारण लम्बिदैं गएको नेकपाको पुर्णएकता विधी र प्रक्रीयाबाट जाँदा पुर्व एमाले हावी हुने सुक्ष्म विश्लेषण पछी कमरेड प्रचण्ड मोलोतोबको शैलीमा बुझे कमरेड , बुझे भन्न बाध्य छन । पार्टीलाई विधिमा नहिडाउने सवालमा ओलीसँगै उभिने तर ओलीको भित्री इच्छालाई कुनै पनि हालतमा पुरा हुन नदिने हैसियत राख्ने प्रचण्ड खुबी कम्तीमा हुन्न , हजारबार हुन्न सम्म भन्ने बाट माथी उक्लन नसक्दाको अवस्थानै दुई सदस्यीय नेकपाको कटु यथार्थ हो ।
नेकपाको वर्तमान अवस्था
वामदेवको आत्मकेन्द्रीत महत्वकांक्षा र हावादारी उडान , माधव झलनाथको लाचारीको जगमा खडा गरिएको गुटगत राजनीतिको फल जसरी पनि खाएरै छोडने एक सुत्रीय रणनीति अन्तत नेकपामा बदल्ने अठोट पुर्व एमालेका वफादार सिपाहीहरुको निम्ती हस्तिनापुर बाट निकालिएको ईन्द्रप्रस्थको ग्यारेण्टी नभएको अवस्था जस्तै हो भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएकै कुरा हो । जीवनभर अन्तर विरोधहरुमा खेल्दै खडा गरिएको राजनैतिक छ्बी कमरेड प्रचण्डको सबै भन्दा ठुलो सिद्धान्त हो भन्ने पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पुर्व माओवादी केन्द्र अन्तर विरोध समेत जन्माउन नसक्ने जनताको मतादेश पछी प्रचण्ड राजनीतिको निम्ती घोत्लिने विषय बन्न पुग्यो ।
तेश्रोमा रमाउँदै प्राप्त गर्ने अल्पकालिन उपलब्धीमा एमाले ओलीले छडके हानी दिए जीवनभर पछुताउनु पर्ने स्थीतिको सटिक आँकलन नै पुर्व एमाले भित्रको अन्तर विरोधबाट आफ्नो राजनैतिक भविष्यलाई निरन्तरता दिने प्रचण्ड दाउ माने पनि नमाने पनि नेकपाको सम्पती भइसकेको छ । ठगले ग्राहक पाउने भनेकै लोभ देखाएर हो भन्ने गुरुमन्त्र सत्ता राजनीतिले सिक्न बाध्य बनाएको दुई वाम घटकले आ-आफ्नै ढंगले बुझेको यथार्थ नै दौडेको तर हिडन शुरु नगरेको नेकपाको यात्रा हेरे थाहा लाग्छ । गोरुले कमाएको घोडाले खाएको कथा दुई सदस्यीय नेकपा भित्र बिचित्र ढंगले लागु भएको वर्तमान समयमा चरित्र , मान्यता , आदर्श र प्रतिबद्धताको कुरा गर्नेलाई वालुवाटारको ढोका नखुल्नु जायज मानिदै छ ।
सिद्धान्त , विचार , नीति , नियम , पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिंदै सामान्तवादको भद्धा नक्कल गर्न मरिहत्ते गरेको नेकपा भित्र राजनैतिक नेतृत्वको लिवास राष्ट्रवाद , समृद्धि र सुशासन उतारे पछी विषयगत एजेन्ट , दलाल , मध्यस्थकर्ता मार्फत प्राप्त चाकडीले पुर्याउने “मक्का-मदिना ” भनेको कर्मचारीको रोडम्याप बाट समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुर्याइने हवाई कल्पना नयाँ सिद्धान्त बनाइदैं छ । जनवर्गिय संगठन , स्थानिय पार्टी कार्यकर्ता , जिल्ला , प्रदेशका नेताहरु नयाँ परिचय प्राप्त गर्न दुई जमिन्दारको दास बन्नु पर्ने नेकपा राजनीति विचित्र सिद्धान्तमा पुग्दै आयु बिहिन भइरहेको देख्ने आँखा धुम्वराही , पेरिस डाँडा , वालुवाटार र सिंहदरवार बाट गायब भइसकेको छ ।
सरकारको लोकप्रियता :
दुई सदस्यीय नेकपा निर्माण सँगै थला परेको पार्टी काम पछी आम जनताले चाहेको विकास , समृद्धि र सरकारको लोकप्रियता कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने बुझ्न रुसी राष्ट्रपतिको जर्मनी यात्राको किस्सा सटिक हुनेछ ।
मिखाइल गोर्बाचेव र उनकी पत्नी पूर्वी जर्मनीको राजकीय यात्राको समाप्ती पछी रूस फर्कने क्रममा ट्रेनमा थिए । केही समयको यात्रा पछी गोर्बाचेव पत्नीले सोधीन । अहिले हामी कहाँ छौं ? मिखाइलले आफ्नो हात ट्रेनको झ्याल बाट बाहिर राखे र भने प्रिय, हामी अहिले सम्म जर्मनीमै छौं । थुप्रै घण्टा पछी उनको पत्नीले सोधिन । अहिले हामी कहाँ छौं ? गोर्बाचेवले आफ्नो हात झ्याल बाहिर राख्दै भने । अहिले हामी पोल्याण्डमा छौं । केही समय पश्चात गोर्बाचेव पत्नीले फेरी सोधिन । अहिले हामी कहाँ पुग्यौ ? गोर्बाचेवले पुरानै तरिका अप्नाएर भने । हामी रुस आइपुग्यौ । उनको पत्नी अत्यन्त उत्सुक हुँदै भनिन । हजुरले कसरी जान्नु हुन्छ ? केवल हात झ्यालबाट बाहिर राख्ना साथ कहाँ पुगियो ? गोर्बाचेवले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए । प्रिय , जब मैले जर्मनीमा आफ्नो हात झ्याल बाहिर राखे । मानिसहरुले मेरो हातमा म्वाई खाए । पोल्याण्डमा आफ्नो हात राखे । मानिसहरुले मेरो हातमा थप्पड हाने । जब मैले रुसमा आफ्नो हात झ्याल बाहिर राखें । उनीहरुले घडी चोरे ।
रुसी राष्ट्रपति गोर्भाचेबले माथीको घटना भोगे भोगेनन । उत्सुकताको बिषय होइन । मुर्छित सपना जगाएको , विकास मात्र हैन समृद्धिको सगरमाथा निर्माण गर्ने कसम खाएको वाम सरकारले आफैले आत्म मुल्याङ्कन गरे थाहा लाग्छ । सरकारको हात सिंहदरवार र वालुवाटार बाहिर राखे हुन्छ । सबै कुरा जनताले नगद मै भुक्तान गर्ने छन ।
कार्यकर्ताको हालत :
सात लाख कार्यकर्ता भूमिका खोज्दै छन । नेकपा निर्माण हुनु भन्दा अघी नेपालको सबैभन्दा अनुशासित , व्यवस्थित र लोकतान्त्रीक पार्टी पुर्व एमाले बिकास र समृद्धिको नाममा बिलोप गराइएको छ । जीवनभर राजनीति बाहेक केही नगरेका र राजनीतिक आन्दोलनको दौरान असंख्य सम्भावनाहरु समाप्त गरेका पार्टी कमरेडहरु केवल दुई सदस्यीय नेकपाको निम्ती बनबास जाने स्थीती पछी पुर्व सोभियत रुसकै जोक सपाटी लिने अवस्थामा तमाम कार्यकर्ता पुर्याइएका छन ।
पुनर्निर्माण र खुलापनको नारा दिँदै अत्यन्त लोकप्रिय छबी बनाएका सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिब एवम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेवले “भोडका” खुला रुपमा पिउन र किन्न प्रतिबन्ध लगाइ दिए । गोर्बाचेवको उक्त कदमले रुष्ट एक कार्यकर्ता “भोडका” किन्ने लामो लाईनमा बस्दै करायो । म आज कमरेड राष्ट्रपतिलाई गोली हानेर मारी दिन्छु । म क्रेमलिन जाँदै छु । उनी कराउँदै चिच्याउँदै लाईन बाट निस्किए । केही बेर पछी उनी फेरी “भोडका” लाईन मै फर्किए । लाईनमा बसेका मानिसले उत्सुकता पुर्वक सोधे । कमरेड , गोर्बाचेवलाई मारी दिनु भयो ? उनले रिसाउँदै भने । क्रेमलिन बाहिर यहाँ भन्दा लामो लाईन छ । त्यसैले म फर्किए ।
अन्तमा , परिबन्धले नेपालमा रहेका वाम कार्यकर्ता विकास र समृद्धिको नारामा निर्माण गरिएको दुई सदस्यीय जमिन्दारको गुलामी गरेर सपना सजाउने कि रसियन कमरेडले जस्तो ” राजनैतिक भोडका लाईन ” मा खडा हुँदै जीवन तुहाउने भन्ने विचित्रको अग्नी परिक्षामा होमिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।